Limbo: Linux အတွက် Steam တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော 2D ဂိမ်း Linux မှ
Limbo: Steam တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော 2D ဂိမ်း
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အားကစားပြိုင်ပွဲ
ငါ Linux တွင်ကစားမည်ဆိုပါက Dont Starve နှင့်ဆင်တူသောဂိမ်းတိုင်းကိုနှစ်သက်သောဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သည်။ ဘိုအယူအဆ ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်၊ ဒါကငါတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေလိုစွဲလမ်းမှုမရှိပေမယ့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ် (Flappy Bird ကိုအဖြစ်သို့မဟုတ် ဂျီသြမေတြီ Dashစူပါဂရပ်ဖစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိသောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1 Limbo ကြံစည်မှု
2 Steam တွင်ရနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဇာတ်ကောင်မှာ (အမည်မသိအမည်) အမည်ရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည်တောအုပ်အလယ်၌သူမှနိုးလာသည့်အဖြစ်အပျက်အစတွင်အမှောင်ထုအားလုံးဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်အစက်နှစ်ခုဖြင့်သာအရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ သူ၏မျက်စိဖြစ်ပါစေ။
ထိုအချိန်မှစ၍ ကောင်လေးသည်သူ၏အစ်မကိုရှာတော့သည်။ ထိုနေရာတွင်စွန့်စားမှုစတင်သည်။ သူကလူနည်းနည်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ သူ့ကိုတိုက်ခိုက်မယ့်သူတွေရှိလိမ့်မယ်။ မရနိုင်ရင်သူတို့အသက်ရှင်နေလားမဖြစ်ဘူးလား ... heh ... heh ...
Limbo သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နေပုံရသည်။ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတွင် "တစ်ခုခု" ရှိနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ထိုအရိပ်ထဲတွင်ဝှက်ထားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပေါ်ထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်လိမ့်မည်။ Limbo သည်နက်နဲသောအရာဝတ္ထုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်ကြားထဲတွင်ပြောစရာရှိသည်၊ သို့သော်ငါပြောစရာရှိသည့် "ခိုင်မာသောပုံပြင်" အကြောင်းပြောစရာရှိသည်။
ဂိမ်းတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှတိုးတက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားရန်အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်၊ လမ်းကြောင်းများ၊ ထောင်ချောက်များ၊ မေးခွန်းများ၊ ပဟေfindိများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံလောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုတင်ပြလာလိမ့်မည်။ ရှုပ်ထွေးသော။
ငါအစမှာပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဒီဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်ပါသည် ရနှေးငှေ့ ဒေါ်လာ ၉.၉၉ အတွက် hardware လိုအပ်ချက်များမှာအလွန်နည်းပါးသည်။ 9.99GB RAM၊ 1Ghz နှင့်အထက် CPU အပြင် OpenGL 2.0 နှင့်လိုက်ဖက်သောဂရပ်ဖစ်များ။
ဒီဟာကအရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ သူကကျွန်တော့်အမြင်မှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုကို (ဥပမာ) အမြဲတမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေဆိုရန်လှည့်ကွက်များမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဆုံးမှာဇာတ်လမ်းကနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာကသူတို့ဟာအဆုံးကိုရောက်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲရမယ်။
cheat အကြောင်း ... Linux ဂိမ်းတွေ၊ ငါတို့ဂိမ်းတွေထဲမှာ cheat တွေမရှိခြင်း (ဥပမာအနည်းငယ်သာရှိခြင်း) အကြောင်းကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်လှည့်ကွက်တွေနဲ့ကစားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြိုက်တဲ့ဂိမ်းကနေရှာနေတဲ့သူတွေ၊ ဂျီသြမေတြီ Dash cheat သူတို့က hehe မကောင်းတဲ့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာပါနှင့် ... ပျော်မွေ့!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » Limbo: Steam တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော 2D ဂိမ်း
18 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
AUR package သည် HumbleBundle ကို installer မှ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်က Steam ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲ Linux အောက်မှာကစားခဲ့ပါတယ်။ ငါအတည်ပြုဖို့အဲဒီနည်းလမ်းနဲ့ငါ install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး HumbleBundle installer ဟာ ၀ င်းဒိုး binary နဲ့အတူတူပါပဲ။
ဂိမ်းကပဟေuzzleိဆန်လွန်းသဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အလွန်ကောင်းသည်။ ဝယ်သင့်သည်။
လူတိုင်းအတွက်အကြံပေးချက်တစ်ခုထားရှိပြီး၊ တိုက်ရိုက်ဂိမ်းတစ်ခုမဝယ်ခင် Humble Store ၏စျေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ကိစ္စတော်တော်များများမှာသူတို့ဟာ HumbleBundle store မှာစျေးသက်သက်သာသာသာရှိပေမယ့် Steam မှာကစားဖို့သော့ချက်ပေးရုံမကသူတို့မှာများသောအားဖြင့် DRM-free copy နှင့်ရံဖန်ရံခါဂိမ်း၏ဂီတတို့ပါဝင်သည်။
ဘို။ သငျသညျထိတ်လန့်ကိုခေါ်နိုင်ကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှာ။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
ကျွန်ုပ်သည် fart နှင့်ပတ်သက်သော PC နှင့် pacman သည် haha ​​ကို run သည်မှာအလွန်ဆိုးသည်
သို့သော်ရသဗေဒနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ဇာတ်လမ်း၏အင်ဂျင်သည် android အတွက် Dead Ninja Mortal Shadow ၏! http://youtu.be/-H12K9ks2XM
PS: ငါတင်ရန်လော့ဂ်အင်ဝင်လို့မရဘူး၊ မင်းမှာသင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ spam ပြproblemsနာတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ထင်တယ်။
"ဒီဟာဒိန်းမတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီး Xbox Live Arcade မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာထွက်လာတယ်။ "
အခမဲ့လား? ဆိုလိုတာကတော့ Gnu / Linux မှာရှိတဲ့ steam ဆိုတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုရေနွေးငွေ့နဲ့ကွဲအက်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုသူတို့အများကြီးကန့်သတ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့လှည့်စားသောဂိမ်းများ မှလွဲ၍ ကျန်ဂိမ်းများကိုဘယ်တော့မှငါမပေးခဲ့ဘူး။
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ ဂိမ်းများအတွက်ဆိုလျှင် ၀ င်းဒိုးကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ သင်ငွေပေးစရာမလိုဘဲအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အတွေးအခေါ်ကိုလိုက်နာသူများအတွက်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ထိုဂိမ်းများသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအစေခံ။ မဟုတ်ပါ။ Gnu / Linux ဆက်လုပ်ပါက၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုကိုယ်စားပြုပြီး၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ပါ။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ကျွန်တော့်အတွက် Linux သည် OS တစ်ခုအနေနှင့်ပိုမိုအောင်မြင်လျှင်၊ လူတွေက၎င်းကိုစတင်သုံးစွဲကြလျှင်၊ ၎င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်ပိုပိုပြီးဖြည့်စွက်ရန်၊ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲအားဖြင့်မဖြုန်းတီးပါကရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ ယခင်ကစီးပွားဖြစ်ဖြစ်လာသည်၊ သို့မဟုတ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကုမ္ပဏီများသည်ယခုထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးရှိသောအရာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်ငွေများများများထွက်ပေါ်လာသည်။
ဖြစ်နိုင်တာလားဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကအမြတ်အစွန်းသိပ်မကြီးတဲ့၊ ငါအခမဲ့လုပ်တဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေလို့ရတယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေကလွဲရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါပြောတယ် ဆော့ဗ်ဝဲကိုလှူဒါန်းမှုများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျော်စရာကောင်းသောအားလပ်ချိန်များတွင်ပြုလုပ်ပေးသောeksရာမလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးသည်။
ယခုငါစဉ်းစားသောအခါ, စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းဖြစ်ပျက်သည်, များစွာသောသူကခိုးယူခြင်းနှင့်ဘာမျှမပေးသော်လည်း, ကုမ္ပဏီများသည်ရပ်နေဆဲနှင့်ပိုက်ဆံဆက်လက်ဝင်ငွေဆက်လက်ပေမယ့်ငါအဘို့အပေးဆောင်နေကြသော "ရိုးသား" လူတွေရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ရမည်ထင်ပါတယ် ဂိမ်းများ, သူတို့သူတို့ back up လုပ်နိုင်အခြားလမ်းစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ဒုတိယ option ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။
Limbo ဟာအကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုပါ။ အကောင်းဆုံး Indies တွေထဲကတစ်ခုပါ။ လုံးဝအကြံပြုပါသည်
Excellent ကဂိမ်းနှင့် Excellent က setting ကို။ ထူးဆန်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခု၊ တေးသံမပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းကသင့်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဂိမ်းကစားစေနိုင်တယ်
အောက်ပါလင့်ခ်ပါသော linux အစိတ်အပိုင်းရှိ identi.li စာမျက်နှာတွင် http://www.identi.li/index.php?cat=126 သူတို့ကဒီဟာ .sh ပါ။ linux အတွက်ခိုးကူးထားသောဂိမ်းအမြောက်အများရှိခြင်းအပြင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ငါထင်တာကတော့ပင်လယ်ဓားပြတွေကိုမြှင့်တင်တာဟာမမှားပါဘူး။ အလုပ်များစွာက GNU / Linux အတွက်ဂိမ်းများစတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်များပြားလွန်းသဖြင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုခိုးယူသွားသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအပေါ်မှာလောင်းတဲ့ developer တွေကိုမနုတ်ပါနဲ့။
ခိုးကူးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိတ်ဆို့ခံထားရသောနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးတရားဝင် ၀ ယ်ရန်ငွေပေးချေခြင်းပုံစံမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ငွေကြေးနှင့်အရင်းအမြစ်များမရှိသောသူများအတွက်သာထိုနေရာတွင်ကြေငြာပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ... T_T တန်းတူအခွင့်အရေးရ
download လုပ်ရန်ရရှိနိုင် Netrunner Rolling 2014.09.1
chattr - Linux ရှိဖိုင်များ / ဖိုင်တွဲများအား attribute များသို့မဟုတ်အလံများဖြင့်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်ခြင်း